🌊 ityotyombe laselwandle, iivibes ezilungileyo kunye nokusetyenziswa simahla kwe 🚲, 🏄🏻‍♂️, 🏖
I-townhouse yonke sinombuki zindwendwe onguWesley
Igumbi lokulala eli-1 elinemixholo emibini yolwandle ngaselwandle. Ukuhamba ngeenyawo ukuya elunxwemeni. Kuphela .25 yeemayile ukuya pier kunye .25 miles ukuya kwindawo yokuthenga / imivalo / zokutyela eDowntown San Clemente.
Ukusetyenziswa kwasimahla kweenqanawa ezi-2 zolwandle kunye nokutshixa, iibhodi zokusefa / ukutyibiliza/ukutyibilika ukuze zisetyenziswe, kunye nezitulo zaselwandle, imidlalo, i-cooler kunye neetawuli zokusetyenziswa.
wifi kunye neNetflix, amazon, Disney, hulu
$25 intlawulo yezilwanyana
Kufuphi neSan Diego kwaye kulula ngokwaneleyo ukuya eLaguna naseNewport. Phola kolu lwandle lunezihloko ze-Airbnb, kufutshane neyona maza ibalaseleyo emhlabeni
Inja enobuhlobo, i-quaint duplex enevibes elunxwemeni kunye nokuziva kamnandi. Uyabelana ngodonga kunye nabamelwane ngasemva abangamaqabane akhululekileyo. Ngenxa yamava exesha elidlulileyo, ndicela ukuba ungenzi itheko okanye ungxole emva kwentsimbi yeshumi ebusuku. Ukuba ngumba lowo, ndikucela ukuba ubhale kwenye indawo. Yonwabela!
4.91 ·Izimvo eziyi-58
ISan Clemente, eyaziwa njengeyona ndawo intle yemozulu yehlabathi kunye nezinye
Kweyona surf ibalaseleyo emhlabeni
Umbuki zindwendwe ngu- Wesley
Active young guy, like to travel and enjoy life. Love my dog and the outdoors
Ifumaneka ngefowuni, i-imeyile kunye nesicatshulwa